Yiba Ngumbuki Zindwendwe Kwinto Eyenza Umahluko Ekuhlaleni
Izinto Onokuzonwabela Ezenza Umahluko Ekuhlaleni
Zenzele abantu abaza kukuxhasa ngenxa yezizathu zakho
Nyusa imali uze wazise abantu ngombutho wakho ongenzi ngeniso uze wenze izinto iindwendwe zakho eziza kuzithanda.
Abantu basekuhlaleni nabahambi mabawazi umsebenzi wakho
Ukusuka ekwabelaneni ngezakhono zakho zokugcina inyosi ukuya ekukhokeleni kwiklasi yokupheka yenkcubeko, unganikezela ngamava anokwenza umahluko ekuhlaleni, nto leyo eyenzelwe ukudibanisa iindwendwe kunye nomsebenzi wakho. I-Airbnb ayikubhatali, ngenxa yoko i-100% iya kumbutho wakho ongenzi ngeniso.
Bukela ibali Lenja Ekhokela Umntu
Fikelela abaphulaphuli abakhathalayo
Chazela abahambi abasemhlabeni wonke abaneembono ezifana nezakho. Njengoko inezigidi zabahambi inyanga nenyanga, i-Airbnb ingawenza ubonakale umbutho wakho ongenzi ngeniso.
Olu luhlobo lwabantu ebesisoloko sifuna ukusebenza nabo - abantu abancinci, abomeleleyo, abanolwazi nabazimiseleyo...njengathi."
UJon, ungumbuki zindwendwe we-“Paddle with Penguins” eKapa, eMzantsi Afrika
Yiba nomvuzo ozinzileyo
Sikwazile ukufumana imali eyaneleyo yokuqalisa iprojekthi yethu yokulondolozwa nokubuyiselwa kwe-villa of Colonnacce yaseRoma (indlu yenkulungwane yesibini B.C.).”
UGianfranco, ungumbuki zindwendwe we- “Archaeologist for a Day” eRoma, eItali
Khuthaza abameli abatsha
Ngokufaka abantu kwinto ofuna ukuyenza, unokufumana amavolontiya angakumbi, nabantu abanikelayo, nabo bakulungeleyo ukuchazela abanye ngayo.
Okwenzeka apha yinto ehlala ihleli. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba olu hlobo lobugcisa soze luphele. ”
UVy, ungumbuki zindwendwe we-“Get uplifted with gospel”
e-Harlem, kwiSixeko saseNew York
Yiba ngumbuki zindwendwe ngokwemiqathango yakho
Seta ukuze iphindaphindwe ngendlela ofuna ngayo, khetha ixabiso lakho nobungakanani beqela (ukuya kuthi ga kwi-10), kwaye ulawule zonke iinkcukacha naphi na apho ukhoyo nge-app yethu yefowuni.
Sifumene amavolontiya okwamkela iindwendwe kathathu ngeveki ukuze sihlale sifumaneka kangangoko.
URyan, ungumbuki zindwendwe we-“Hike Runyon Canyon kunye nenja yokuhlangula” e-Los Angeles, eMerika
Fumana umbuki zindwendwe
Ngubani ochazela abanye ngento ozimisele ukuyenza? Cinga ngokusebenzisa abasebenzi, amavolontiya, abantu basekuhlaleni kunye nabo baxhamlayo njengababuki zindwendwe bento yakho enokonwatyelwa – unokuqesha nengcali ewuqondayo umcimbi.
Funda ngemilinganiselo yethu yokufaneleka
Qinisekisa umbutho wakho ongenzi ngeniso
Ukuze umbutho wakho ongenzi ngeniso uxhamle kwinkxaso-mali, kuza kufuneka ubhaliswe kumbutho wokuqinisekisa esisebenzisana nawo.
Yazisa abantu ngento ozimisele ukuyenza, ngendlela ekhethekileyo nekhethwe nguwe. Ukuba into yakho enokonwatyelwa iyayifikelela imigangatho yethu, ungafaka imihla uze uqalise ukwamkela iindwendwe!
Funda ukuba yenziwa njani
Khuthazwa kukubona izinto onokuzonwabela ezenziwa ngokoqobo
Jonga into eyenziwa ngamakhulu emibutho engenzi ngeniso emhlabeni wonke ukukhuthaza ukukhathalelwa kwabantu, ukuvelisa abameli bexesha elide, kunye nokunyusa imali.
Hlola izinto ezinokonwatyelwa Ezenza Umahluko Ekuhlaleni
I-Airbnb inceda abantu bafumane iindawo zokuhlala nezinto abanokuzenza emhlabeni wonke. Le ntsapho iqhutywa ngababuki zindwendwe, abanika iindwendwe zabo ithuba elikhethekileyo lokuziva ngathi zingabahlali bendawo ezihambele kuyo.
Ziintoni onokuzonwabela e-Airbnb?
Into eyenziwa nekhokelwa ngabantu basekuhlaleni abazimiseleyo. Izinto onokuzonwabela zikodlula le ukukhenketha okuqhelekileyo okanye iiklasi kuba zenza iindwendwe zibone izinto ezingafane zizibone. Nabani na angathetha ngento athanda ukuyenza, isakhono anaso okanye into ayenza kakuhle ngaphandle kokufuna igumbi elongezelelekileyo.
Ngubani onokuba ngumbuki zindwendwe Owenza Umahluko Ekuhlaleni?
Ababuki zindwendwe abanceda abantu basekuhlaleni basenokuba ngabasebenzi, amalungu ebhodi, abasebenzi bekontraki, amavolontiya, okanye abaxhasi be-NGO/umbutho ongenzi ngeniso. Baziingcali kwimisebenzi yombutho ongenzi ngeniso kwaye uyabavumela ukuba bamkele iindwendwe.
Luhlobo olunjani lombutho olukufanelekelayo ukwamkela iindwendwe kwinto Eyenza Umahluko Ekuhlaleni?
Lo mbutho kufuneka ube yi-NGO/umbutho ongenzi ngeniso obhalisiweyo njengoko ichazile i-TechSoup esisebenzisana nayo, kwaye umele uqinisekiswe yi-TechSoup portal. Ngubani ongakufanelekiyo ukuba ngumbuki zindwendwe wento enokonywatyela Echaphazela Abahlali? • Yimibutho yenkonzo, ngaphandle kwaxa imisebenzi eyixhasayo ingenanto yakwenza nenkonzo, njengaxa inika abantu ukutya okanye indawo yokuhlala, kwaye inika abantu bazo zonke iinkonzo. • Yimibutho ecalulayo okanye enemithetho yayo yodwa yenkonzo, yesini, nakweminye nje imiba eyahlukahlukeneyo, nokuba oko kuyavunyelwa yimithetho yasekuhlaleni. • Yimibutho yezopolitiko okanye yokutsala abantu, imibutho yabasebenzi/yabafazi nemibutho ethile kamasakhane. Funda okungakumbi: www.airbnb.com/ukuba-ngumbuki-zindwendwe-wento-enokonwatyelwa-eyenza-umahluko-ekuhlaleni
Ngaba i-Airbnb iyabhatalisa?
Ayisebenzi kubabuki zindwendwe bento enokonwatyelwa Eyenza Umahluko Ekuhlaleni. I-Airbnb inikela nge-20% kubabuki zindwendwe bemibutho evunyiweyo engenzi ngeniso. Oko kuthetha ukuba yonke imali efunyenwe kwinto enokonwatyelwa iya ngqo kwiakhawunti yebhanki yombutho wakho.
Ndifanele ndizamkele kangaphi iindwendwe?
Izinto ezinokonwatyelwa zenzelwe ukuba ziphindaphindwe, zihlale ziqhubeka ukuze zibhukishwe ngabantu basekuhlaleni kunye nabahambi. Ekubeni uza kukulawula ngokupheleleyo ukufumaneka kwakho kwikhalenda yakho, ungagqiba ukuba ufuna ukuzamkela kangaphi iindwendwe. Abanye ababuki zindwendwe Abanceda Abantu Basekuhlaleni bamkela iindwendwe kathathu ngeveki, kanti abanye bazamkela kabini ngenyanga. Sicebisa ukuba wamkele iindwendwe ubuncinci kanye ngeveki ukuze ube namathuba angakumbi okunxibelelana nosapho lwakwa-Airbnb. Xa uneentsuku ezininzi ofumaneka ngazo, zininzi neendwendwe eziza kukubona xa zikhangela kwiwebhsayithi. Njengoko iintsuku ezingakumbi zithetha ukubonakala ngakumbi, asikukhuthazi ukuba ube nayo kanye nje kuphela into yokonwatyelwa okanye umcimbi Owenza Umahluko Ekuhlaleni.
Ngaba kunokubakho ngaphezu kombuki zindwendwe omnye kwinto yam enokonwatyelwa?
Ewe. Ukuze afaneleke, wonke umntu ongumbuki zindwendwe okanye oncedisa ekwamkeleni iindwendwe kwinto enokonwatyelwa kufuneka abe neakhawunti ye-Airbnb, ibe kufuneka akhankanywe ngegama kwicandelo elithi "Malunga nawe". Akuhambisani nemigaqo ye-Airbnb ukuba nababuki zindwendwe abaliqela ngaphandle kokuba balandela imigaqo engasentla.
Ngaba kufuneka ndibhalise ikhaya lam kwi-Airbnb ukuze ndikwazi ukuba ngumbuki zindwendwe wento enokonwatyelwa ye-Airbnb?
Hayi akunjalo. Izinto ezinokonwatyelwa ze-Airbnb kunye Namakhaya e-Airbnb zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa bayakwazi ukwabelana ngezinto abazithandayo kwaye babe ngabameli besixeko sabo bengakhange bamkele zindwendwe emakhayeni abo. Iindwendwe Zento Enokonywatyelwa, akukho mfuneko yokuba zihlale Ekhayeni ukuze zibhukishe Into Enokonwatyelwa. Iindwendwe ezininzi Zento Enokonwatyelwa zingabahambi abahlala kwizindlu ze-Airbnb, kodwa sikwabona neendwendwe zasekuhlaleni njengendlela yokuqinisa ubudlelwane nokwenza abahlobo nabantu basekuhlaleni.
Ubhatalwa njani umbutho ongenzi ngeniso?
Njengokuba ababuki zindwendwe Abanceda Abantu Basekuhlaleni befumana yonke imali eyenziwe kwinto enokonwatyelwa, kufuneka banxibelelanise iakhawunti yebhanki yombutho ongenzi ngeniso kunye neakhawunti ye-Airbnb abayisebenzisayo. Oko kuthetha ukuba kuza kufuneka uvule iakhawunti entsha ye-Airbnb usebenzisa idilesi yeimeyile yombutho ongenzi ngeniso ukuze imali ifakwe kwiakhawunti yawo yebhanki. Kwiiyure eziyi-24 emva kokuba iphelile into yokonwatyelwa, uza kubhatalwa ngendlela oyikhethileyo.
Kutheni i-Airbnb inenkqubo yokunceda abantu basekuhlaleni?
Injongo ye-Airbnb kukwenza abantu bazive besekhaya naphi na emhlabeni. Sivakalelwa kukuba enye yeendlela eziphumelelayo zokwazi indawo nokwenza abahlobo kukuqonda iingxaki ezikhathaza abantu basekuhlaleni. Ukusebenza ne-NGO/umbutho ongenzi ngeniso, kusivulela ithuba lokuqhubeka nenjongo yethu yokuzama iindlela ezahlukahlukeneyo zokonwabisa abahambi ngoxa sinceda nabantu basekuhlaleni.